Yakanakisa Kwese Yakakwana ziso yekugeza chiteshi Mugadziri uye Fekitori | Bohua
Iyo inodziya yemvura kutenderera eyewash chiteshi inokodzera iko panguva imwe chete kushandiswa kwema multiple eyewash zvishandiso, kuve nechokwadi kwekuburitsa mvura tembiricha pakati pe15,7-37.8 madhigirii. Iyo sisitimu inoshandisa hombe yekuchengetera tangi, ichipa kupihwa kwemvura kwe71 gal / min, iyo inogona kupa mvura kune imwechete kana akawanda mawadhi ekugeza maziso, kuve nechokwadi chekuti mvura yekushandisa nguva inopfuura maminetsi gumi nemashanu.
Chishandiso chakagadzirwa nesimbi uye huni chimiro hwaro, inokodzera kushandiswa kwemukati mufekitori. Iyo inopisa mvura uye inotonhorera mvura inosanganiswa neyemagetsi kudziya mudziyo, uyezve ndokupihwa kune ziso washer kuti ishandiswe. Chigadzirwa chinoenderana nezvinodiwa patembiricha yemvura yeziso rewasher yakatsanangurwa muAmerican ANSI Z358-1 2014 ziso washer standard. Inogona kushandiswa munguva yechando, inodziya mvura kutenderera eyewash chiteshi kuumbwa: yemagetsi kudziyisa mvura yekuchengetedza tangi, pombi yekumanikidza, kutenderera pombi, inopisa uye inotonhora musanganisi.
Magetsi inopisa mvura yekuchengetera tangi inopa mvura inopisa uye inotonhorera mvura kuitira kuti nzira yekubuditsa mvura yeziso yeziso ienderane neANSI Z358-1 2014 eyewash standard. Iyo yemagetsi yekudziisa yekuchengetera mvura yekuchengetera tangi yakagadzirirwa neyemagetsi heater kupisa sosi yemvura, uye tembiricha controller kudzora tembiricha yemvura sosi yetangi yekuchengetedza mvura kudzivirira iyo chiitiko chekupisa kwekupisa kwetembiricha yemvura. Iyo inopisa uye inotonhorera yemvura musanganiswa inodzora iyo inobuda mvura tembiricha yeiyo eyewash. Tembiricha yemvura inobuda yemusanganiswa wemvura inopisa uye inotonhorera inogona kumisikidzwa maererano netembiricha iri mukati memunda munguva yechando. Imwe kana yakawanda michina yekugeza maziso inogona kupihwa kuti ishandiswe.
Izvo zvinhu zvemagetsi muhurongwa ndezve rudzi rwekuputika-chiratidzo, icho chinogona kushandiswa munzvimbo dzinopupurira-proof. Iyo sisitimu yakabatana nemudziyo weiyo general control room. Kamwe kana yeziso rikashandiswa pane saiti, chiratidzo chekuchinja chinogona kupihwa kune yakajairwa imba yekutonga. Iyo system sisitimu yakagadzirirwa nekuputika-chiratidzo acoustic-Optical alarm uye yekuputika-chiratidzo mwenje.
Yekutanga modhi: 0209-10968
0209-1097: Iyo dhizaini yemvura yekuchengetera bhaketi inoshandurwa pahwaro hweiyo yekutanga modhi
0209-1098: Zvichienderana neyakakosha modhi, inochinjirwa kune yekunze bhokisi mhando dhizaini
0209-1099: Pamusoro peiyo yekutanga modhi, inokwidziridzwa kumagetsi ekupisa ekuchengetera tangi dhizaini ine yakavhenganiswa mvura yechando uye inopisa mvura.
Pashure: Yakakwirira yekugeza ziso mudziyo
Zvadaro: Yakasarudzika eyewash
Kutenderera Yemvura Yeyewash Chiteshi
Yakakwana Yeyewash Chiteshi
Kutonhora Uye Kuchenesa Eyewash Station
Mhepo Inodziya Eyewash Station
Mvura Yekuchengetera Eyewash Station